२०७८ साल वैशाख १ गते देखि यी ५ राशिको चम्किन्छ भाग्य,हेर्नुहोस कुन कुन राशि हुन् त ? | Butwal Dainik
२०७८ साल वैशाख १ गते देखि यी ५ राशिको चम्किन्छ भाग्य,हेर्नुहोस कुन कुन राशि हुन् त ?
काठमान्डौ :- ग्रह गोचरका कारणले गर्दा यी पाँच राशिका मानिसहरूको समय राम्रो हुने भएको छ । उन्नति प्रगति, धन सम्पत्ति लगायत सबै कुराहरूले यी पाँच राशिलाई फाइदा नै फाइदा हुने छ ।
सबैभन्दा पहिले तुला राशि
राहु अष्टम भाव, केतु दोस्रो र बृहस्पति पञ्चम भावमा र शनि चौथो भावमा रहेको छ । राहु र केतु ले केही नकारात्मक अवस्था त दिन्छ तर, पनि समय बलवान् रहेको छ । बृहस्पतिले पञ्चम भावबाट धन सम्पत्ति लाभ हुने योग रहेको छ ।
शस नामन राजयोग रहेकाले । स्व राशि भएर शनि बसेका हुनाले यसले जमिन, जयदाज प्रशस्त रूपमा बढ्ने भएको छ । साढेसाति रहेको हुनाले शनिवार पिपलमा जल चढाउनु राम्रो हुन्छ ।
शनि सप्तम भावमा स्वराशि भएको हुनाले यहाँ पनि स्व राजयोग रहेको छ । बृहस्पतिको केही नकारात्मकता रहेको देखिन्छ । एघारौँ घरमा राहु भएकाले अप्रत्याशित धनको योग रहेको छ ।
सेयर मार्केटबाट निकै फाइदा हुने बाला छ । अचानक धन हातपर्नेे योग रहेको छ । सन्तानबाट भने केही अशुभ अवस्थामा रहेको छ ।
शनि पनि दसौँ भावमा रहेकाले यसले पनि स्व राशि भएका कारणले निकै राम्रो हुन भएको छ । यसले गर्दा निकै फाइदा हुने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको पनि निकै राम्रो देखिन्छ ।
आफ्नै पेशाबाट फाइदा हुने छ । जागिरबाट पनि प्रमोसन हुने देखिन्छ। राहु धन भावमा रहेकाले धन निकै नाश हुन्छ । खर्च निकै हुन्छ र वेक्कारको बहस नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
साढे साति दशाले कम घाटा गराउने छ । बोली राम्रो बनाउँदै जाने छ । सच्चित धन निकै जोहो हुने देखिन्छ । लाभ प्रशस्त हुने छ । साझेजारी व्यवसायबाट पनि निकै फाइदा पुग्ने छ ।
जग्गा जमिन धन सम्पत्ति लगायत निकै प्रशस्त धन राशि प्राप्त हुने देखिन्छ । शुभ अवस्था रहेको छ । जोस र जाँगर प्रशस्त रूपमा प्राप्त हुने छ ।
शस नामक राज योग त छैन तर, पनि समय निकै राम्रो रहेको छ । जोस र जाँगर प्रशस्त रूपमा प्राप्त हुने छ। तेस्रो भावको राहुले निकै राम्रो बनाउने छ । केही खर्च भने हुने छ । वैदेशिक यात्रा त्यत्ति राम्रो छैन । तर, आएको श्रोतहरू निकै नै रहेका छन् ।